Daraasada Garaaca Wadnaha Suuqgeynta ee 2013 | Martech Zone
Waan burburinaynaa. Khibrad la’aan iyo tababar la’aan, qaab-dhismeedyo iyo habraacyo abaabul oo si qaldan loo qaabeeyey, iyo dhaqammo dhaxal gal ah ayaa maalmahan curyaaminaya suuqleyda. Qalabka iyo teknoolojiyada ayaa isbeddelaya oo soo baxaya toddobaad kasta - laakiin kuma filna. Tani waa sababta muhiimka ah ee aan u bilownay DK New MediaClients Macaamiishayadu waxay si fudud ugu baahan yihiin kor u qaad si ay uga caawiso inay hore u socdaan oo si wax ku ool ah ugu dabakhaan miisaaniyaddooda suuqgeynta xeeladaha oo dhan.
Aragtida ku jirta qodobkan waxaa laga soo qaatay khibrad toos ah oo lala shaqeynayo maareeyayaasha sumadaha iyo suuqleyda, sahamin tiro ku dhow 200 oo hoggaamiyeyaal suuqgeyn ah (Noocyada Finch iyo Daraasada Garaaca Wadnaha ee Netplus, Ogosto 2013), iyo wareysiyo taxane ah oo lala yeelanayo dadka ka shaqeeya goobtan maalin iyo maalinba. Natiijooyinka waxay si cad u muujiyeen in la joogo waqtigii suuqleyda ay joojin lahaayeen inay iska dhigaan wax walba inay gacanta ku hayaan. Guusha ama guuldarrooyinka noocyadooda ayaa ku xiran.
Maxay tahay kooxdaada ay la halgameyso? Sideed uga guuleysanaysaa caqabadahaas? U aqri qodobka Netplus go'aanadooda.
Tags: marketing digitaldaraasadda suuq geynta dijitaalkanoocyada finchcilmi baarista suuqgeyntasahaminta suuq geyntanet oo lagu daray